Karazana bisikileta inona no tsy manana pedal? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Bisikileta kely kokoa ho an'ny olon-dehibe - vahaolana maharitra
Bisikileta kely kokoa ho an'ny olon-dehibe - vahaolana maharitra
Karazana bisikileta inona no tsy manana pedal?
(tabataba metaly) (mozika EDM hypnotic) - telo, roa, iray, avo, avo, avo, avo, avo, avo, avo! Inona no fanatsarana tsara indrindra azonao atao amin'ny bisikiletanao? dia milaza fa manao ny tetezamita amin'ny pedal fisaka mankany amin'ny clipless. - Clipless dia anarana mampisafotofoto satria mitaingina mitaingina ianao, fa ny anarana dia avy amin'ny fotoana nahitana ny rantsan-tongotra sy ny tadiny, ilay tranom-borona hita maso manodidina ny tongotrao, no nofidin'ny safidy. Ireo pedal vaovao ireo dia tsy nanana clip azo jerena ary nantsoina hoe clipless.- Eny, izao izay mampiasa pedal tsy misy clip dia hilaza aminao fa mahomby kokoa izy ireo, mahatonga anao ho haingana kokoa ary hifehy anao kokoa amin'ny bisikiletanao.- Nefa afaka miaraka it Ireo pedal ireto dia tena hametaka pedal bebe kokoa, handeha haingana kokoa ve ianao sa misy tsy itovizany mihitsy? Ho hitantsika izany, ary amin'izany dia hiresaka iray amin'ireo fiakarana tsy mampino indrindra eto an-tany isika, indroa.
Angamba tsy ny fiakarana rehetra. Indray mandeha amin'ny pedal fisaka ary indray mandeha miaraka amina pedal tsy misy clip mahazatra toa azy, dia mora izany ary tsy ny zava-misy fa ny fiakarana iray manontolo dia ny Sa Calobra any Mallorca, kilometatra sivy sy sasany miaraka amina gradien 7%. Fa kosa, aheninay ho telo kilometatra eo akaikin'ny tamponanan'ny tampon'isa ihany izy io.
Averina indray, ny làlana mahazatra dia mihoatra ny 7% Raha te hahalala izay tombotsoan'ny pedal tsy misy clip ianao, ny hany ilainao dia ny manao google haingana ary ho hitanao fa ny hevitra dia ny famindrana herinaratra sy ny fahombiazany. Koa satria mifamatotra ara-batana amin'ny pedal ny tongotrao, dia tokony hahomby kokoa ianao. - Eny, azonao atao koa ny mamindra herinaratra bebe kokoa satria azonao atao ny misintona ny pedal miakatra sy midina, mahomby kokoa ny tadin'ny pedal anao.
talantalana bisikileta fiara
Saingy, Chris, toa tsy misy dikany daholo izany, satria tsy misy dikany ilay voalohany ary nolavina ilay faharoa.- Eny, ary na dia marina aza izany dia tsy ho tratranao mihitsy aho mihazakazaka pedal fisaka roa.- Eny, Tsy maintsy esoriko aminao izany, marina? - Eny, ny clip nataoko dia raha tsy narotsako aloha. - Hanao hazakazaka roa isika.
Ny hazakazaka voalohany azonay dia ny amin'ny pedal tsy misy tsindry miaraka amin'ny kiraronay bisikileta Fizik. Tokony hitondra soa antsika izao, Benchmark. Eny, ny hazakazantsika faharoa dia ny sneakers sy ny fisaka. - Ary amin'izao fotoana izao dia tokony hasongadintsika ny fahasamihafana miharihary eo amin'ny fanomanana roa; hitanao, ny kiraro bisikileta dia henjana tokoa ary amin'ny fahombiazan'ny mega Fa raha mitaingina kiraro fisaka ianao, dia azo inoana fa efa nividy kiraro bisikileta ianao ary noho izany dia mety manana mpampiofana somary malefaka ihany - eny, kely toy izany raha ny marina.
Ireo Sneakers ireo dia natao ho an'ny hazakazaka sy fandehanana ary tsy natao hitondra herinaratra amin'ny alàlan'ny pedal - Marina, andao hiresaka momba ny fitsapana. Mba hisorohana ny fifaninanana tafahoatra ataontsika tsy hiditra an-tsehatra dia hataonay manokana ny fanandramana azy. Midika izany fa mpamily iray fotsiny isika isaky ny mandeha. - Ie, fa aza manahy.
Hanao ezaka faran'izay betsaka izahay ary tsy avela hahita ny angon-drakitra misy anay. Noho izany, Chris, esory ny lohan'i Wahoo.- Ao am-paosinao.- Vao nandia ny roa ampahatelon'ny lalan'ity fiakarana malaza, Sa Calobra ity izahay sy i Chris ary hiakatra amin'ny sarotra indrindra izahay handehanana any. - Eny, ny tetezana eo an-tampony na eo an-tampony indrindra.
Misy antony nanapahanay hevitra fa hanao telo K fotsiny, sa tsy izany? Tsy te hanao fampihetseham-batana maharitra 30 minitra misimisy aho mba hialana amin'ny havizanana voangona. Mety hampihena kely ny valiny izany. Saingy heveriko ihany koa fa hahaliana kokoa ny manao zavatra somary trano antsasaky ny sprint nataonao farany sy ny ezaka lava nataon'izy ireo - vonona ve ianao amin'ny fiezahana farany ambony? - Raha vonona ho vonona foana aho, James - Eny ary, ianao no mandeha voalohany - Inona, ary efa nanenjika ahy ve ianao? The climb? - Eny.- Omeo telo minitra fotsiny aho.
Tsy misy halako intsony --- manomboka aho. (mozika EDM hypnotic) Chris Opie, mihazakazaka laharana voalohany amin'ny pedal tsy misy clip. Telo, roa iray, ambony, ambony, ambony, ambony, ambony, ambony, ambony! (Hira EDM miala sasatra) Marina, tokony hitsangana kely i Chris izao, hanomboka ny tenako aho.
Telo, roa, iray, manantena fotsiny aho fa afaka manao clip ao. Marina, voahitsaka ao, andao hanenjika ilay sprinter haingana! (mozika EDM milamina) - Maharary izany, araka ny nampoizinao. (manintona) Fotoana izao hidina amin'ny rihana ambany, hiova pedal ary handeha indray dia afaka misambotra ahy. (mozika EDM milamina) - Mihazakazaha laharana voalohany.
Andao hifindra pedal izao. Whoa! - tadiaviko ireo Aza asiana pedal amin'ny bisikiletako, toa tsy fantatro izany, tiako holazaina hoe, izy ireo 'dia ambany noho ny fantsona ary tsy dia mihodina ny bearings sao dia azonao atao fotsiny ny mandray ilay fitsapana. tsy rariny izany.
Rehefa dinihina tokoa, izany rehetra izany dia natao ho an'ny siansa - Eny, okay. (mozika rock bluesy malefaka) - Marina, Chris, ahoana ny fahatsapana fanaovana kiraro amin'ny Pinarello anao? - Tena hafahafa satria tsy haiko, ny tiako holazaina dia tsy fantatro hoe aiza no hametrahako ny tongotro, ahoana no tsy hanaovana bisikileta amin'ity kiraro ity .- Tsia, vonona ve ianao amin'izany ezaka faran'izay lehibe telo kilometatra izany ? - Tsia, tsia tsia.- Eny, aza manahy, vady, satria eto ianao.
Vonona ve ianao? Telo, roa, iray ary ambony! Miakatra, miakatra, miakatra, miakatra, miakatra, miakatra, miakatra! Miadana ny fahitana azy. (Mozika rock aggressive) Ny zavatra tsara momba ny fisaka dia tsy mila miahiahy momba ny fametahana aho, ka tsy misy na inona na inona, telo, roa, iray, avo! (mimonomonona) Fanombohana miadana. Oh, sarotra noho ny nieritreretako azy io. (mozika rock mahery setra) Whoo! Mafy izany.
Mahatsiaro ahoana ianao? - Tena hafahafa izany satria isaky ny te hifoha ianao dia tsy afaka mandaka ilay pedal ambony toy ny mahazatra. Raha ny marina dia mora kokoa ny nipetraka nipetraka ary nanodina fitaovana somary avo kokoa noho ny mahazatra. - Ahoana no tokony hijerentsika ireo vokatra ireo? - Eny, mila solosaina finday isika, noho izany dia hataontsika amin'ny toerana hafa izany ary hankafizintsika ny sisa amin'ny diantsika ankehitriny, hoy aho. - Niverina tany amin'ny foiben'ny GCN izahay ary eo ny valiny rehetra.
Ka Chris, vonona hamelabelatra ve ianao? - Izaho izany, ka nanapa-kevitra ny handeha amin'ity halavirana telo kilometatra ity eo an-tampon'ny Sa Calobra, hanomboka amin'ny pedal tsy misy clip aloha izahay? - Andao ataontsika - Izahay no mitondra azy io taloha. James, 367 watts, revolisiona 78 isa-minitra, izany no haingana ny filàzany, 9:17 minitra. - Tsy ratsy. - Ankehitriny dia niofana kely aho, vitako ny nanakodia anao tetsy. 9: 12 minitra, saingy nanao watts betsaka kokoa aho satria mavesatra kokoa noho ianao.
Ka 409 watts io, fa cadence misy 73. Matetika mandeha bisikileta miadana aho, miakatra indray. Tsikaritro fa toa foana ianao amin'ny fitaovana mora kokoa ary mihafainganam-pandeha kely.
Ka tsy nisy tsindry. Mazava ho azy fa voaofana mitaingina izany isika. Fantatsika ny atao hoe voafandrika - Somary hafahafa ny trano fonenana, sa tsy izany? - Somary kely.
Tsy nitovy tanteraka izany. Tokony ho azontsika aloha ny valiny? - Andao ataontsika - Marina, 351 watts ho anao amin'ny 70 rpm miaraka amin'ny ora 9:42 minitra. Napetrako teto ny fito segondra satria nahavita 9 47, 380 watts aho, saingy nilatsaka kely kosa ny filaharako.
Ary samy very ny gadra kely izahay roa, fa ny ahy kosa very mihoatra ny anao, 62 RPM - Ka inona no fehiny? Heveriko fa tsy mandany fotoana be isika, fa miankina amin'ny fahatsapana avokoa izany rehetra izany - eny, marina. Hitsangana ianao na hiezaka ny hiala amin'ny fihodinana ary hanafaingana ary hanandrana hisintona ny pedal, saingy tsy nanao izany ianao, ka nahatsapa ho tsy dia tsara ilay bisikileta teo ambaninao, tsy zatra mitaingina tsy misy clip izahay. Ka, toa ny nolazainao, dia vahiny taminay izy io - Ie, tiako holazaina fa miankina amin'ny fikotranan'ny pedal aho, indrindra rehefa miakatra aho, noho izany dia somary mila mihodina aho ary miantehitra aminy.
Tsy nanana ilay tee ilay fahatsapana fa tsy afaka nanakaiky ny fanatrarana ny hery akory aho. - Tsia, tsy mahazo io fanoherana voalohany io ianao mandra-pahatapitry ny doka, sa tsy izany? Raha ny marina, ny tsy fitovian'ny fampisehoana dia heveriko fa: 'Tsy dia 10% akory izany, noho izany dia 5%, ka tena tsy dia ratsy mihitsy. Saingy ny fahatsapana sy ny fahatsapana ihany no nahatonga izany, sa tsy izany? Tsy nahatsapa izany izahay fa nijanona tsy nitaingina bisikileta akory - Tsia, fa ankoatr'izay dia mieritreritra aho fa tsy manana banga lehibe amin'ny fotoana araka ny nieritreretantsika azy ireo - Ka raha manana trano ao an-trano ianao ary tsy tena te hiova fa aza terena. - Tsia, manaova izay mahafinaritra, heveriko ny ankihibe - ary kitiho eto ambany raha mila fanazavana fanampiny.
Misy bisikileta mandanjalanja ve ho an'ny olon-dehibe?
Fandanjanabisikiletana mihazakazakabisikiletanatsy misy bisikileta pedalna soavaly manjadiafampiofananabisikiletaizay manampy ny ankizy hahay handanjalanja sy hamily. izanytsy mananatongotraafaka mitsofoka,tsydrivetrain,tsyrojo,tsyfitaovana,tsyshifters,tsyderailleurs, arytsyfreewheel.
>> Fitsarana: Hey ry zalahy, niaraka tamin'ny namako Brian aho ary niresaka momba ny bisikileta izahay ary nilaza izy fa 'mbola tsy nitaingina bisikileta mihitsy aho' ary fantatrareo fa tsy maninona aho toy ny 'wow'. Ity dia karazana mangatsiatsiaka, hampianarinay anao ny fomba sy ny fahafantaranao fa nanomboka nanamboatra azy izahay. Saingy nieritreritra aho fa milay ny manao lahatsoratra raha sanatria ianao na olon-kafa manandrana mianatra mitaingina bisikileta mora foana, saingy misy singa fototra sasany hahalalana izany.
Eny ary, noho izany misy ny singa fototra amin'ny bisikileta. Ny ampahany iray tena lehibe dia ny freins. Ka ireo no levers frein, eto, ary misintona ny kalipera izay mampifandray ny pads amin'ny sisiny.
Ny bisikileta sasany dia manana freins disc ary zavatra hafa, saingy ho zava-dehibe izany. Rehefa mianatra mitaingina bisikileta ianao dia mila bisikileta mihazakazaka mifanaraka aminao izay ahafahanao miatrika azy mora foana. Jereo hoe ny tongony fisaka amin'ny tany.
Ity dia toerana mahafinaritra, tsy manandrana izy fantatrao fa ny mijoro amin'ny kofehin-dambany dia milatsaka avy eo amin'ny bisikileta.
Ary izany dia manome fotoana fohy ny bisikileta, ary tena ilaina izany satria manome anao mandanjalanja. Ary avy eo mahatsiaro ho milamina. 'mandrosoa ary daka kely i Brian ary atsangano ny tongotrao avy eo. 'Jereo hoe ahoana no ahafahany manainga ny tongony tahaka izany? Mitaingina bisikileta izy amin'ny ankapobeny, ny tiako holazaina dia tsy mandeha an-tongotra na inona na inona izy fa mahatsapa fandanjalanjana.
Ary jereo, raha nanandrana nitodika an'i Brian ianao dia nianjera ianao dia afaka nametraka mora foana ny tongotrao. Tsy mila milatsaka mihitsy izy! Mazava ho azy fa manana ny fiarovan-dohany izy. Maninona ianao no tsy mihodina? Ie, jereo ny fomba ametrahany mora foana ny tongony havanana.
Mianatra mandanjalanja àry izy ary izany no dingana voalohany rehefa miezaka mianatra môtô ianao. Uh, tohizo ary hazony i Brian, andao isika. Tsy mitaingina haingam-pandeha izy ka tena mila mampiasa freins, azony atao fotsiny ny mampidina ny tongony raha miha haingana izy dia hanomboka hamboatra satria ity no karazana bisikileta azonao ahemotra.
Ka eto, maninona ianao no tsy maka ny hitanao ve fa miverina toy izany? Um, eny, afindrao fotsiny ny tongotrao fa izaho, eny jereo ity.
Ny sasany amin'ny bisikiletan'ny ankizy sy ny entany rehefa mihemotra ianao dia ny frein-nao, fa ity kosa somary manambola kely. Noho izany, fantatrao fa tsy maintsy manomboka mitaona anao izy handray ny tànany ary hanatratra ilay salaky ny frezy. Amin'ity bisikileta ity dia mampihetsika ny frein ao aoriana ny lever havanana.
Ary io no freins tsara indrindra ary afaka miala ianao. Um, koa raha manomboka mihetsika ianao dia mety hianjera rehefa mihetsiketsika ny any aoriana, azonao atao ny manintona azy ao aorianao, ary hanana fotoana mora kokoa ianao amin'ny fandanjana, ka ny zavatra manaraka nataon'i Brian dia ny fanazaran-tena. , fa amin'ny tongotra iray ihany. Ary apetrany amin'ny pedal ilay tongotra iray hafa.
Hitanao ve izany? Io tongotra io dia hiala amin'ny tany foana. Ary midika izany fa lasa ny antsasaky ny fifandanjany; ny tongony hafa sisa no azony ianteherana. Hanampy azy handeha haingana kokoa izany ary hampitombo koa ny filanjana amin'ny vatany fa tsy ny tongony, okay? Ary tsara, tsara izany, hitanao, ny tananao eo amin'ny frein, izany no zava-dehibe satria efa saika nifandona kely tamin'ny fiara tany izahay taloha, nianatra momba nitaingina bisikileta ary nanadino fa 'oh, mila vaky aho' maninona tsy manao an'ity Brian ity ve ianao, mankanesa amiko fotsiny.
Mitovy amin'ny moto scooter io, ny tongotra iray ambony ary ny daka iray hafa. Azafady, fantatrao fa eny amin'ny làlana tsy dia be loatra no anaovanay izany ka azo antoka tsara. Manana ny fiarovan-dohany izy.
Ka zahao ity! Mitaingina bisikileta izy izao. Tsy manao pedal na zavatra hafa izy mihodina.
Mandrosoa hanapaka ho ahy any ka mbola nampiasainy kely ny tongony fa ny freins no nampiasainy. Ka izy no mamolavola ny toe-tsaina ilainao mandeha bisikileta. Ary toy ny, ara-bakiteny 'Oviana ianao no nanomboka nandalina, Brian?' >> Brian: 20 minitra >> Fitsarana: '20 minitra 'ka vetivety fotsiny izahay eto dia manao fanazaran-tena any ivelany ary nanapa-kevitra ny hampiasa fakantsary aho.
Fa tena mahafinaritra izany, toy ny ao anatin'ny 20 minitra dia afaka mandeha sambo ianao amin'ny ankapobeny. Heveriko indray fa tena zava-dehibe ny manomboka amin'ny fananana habe bisikileta mety. Ary avy eo koa ireo toetra ireo satria 'nianjera ianao?' >> Brian: Tsia >> Fitsarana: Tsia, tsy nianjera mihitsy izy.
Tsy misy rangotra, tsy misy tahotra mitombo, ahoana ny fandanjalanjana. Fantatrao fa mianatra izy! Mahatsiaro tena ho ampy angamba ve ianao toy ny mametraka ny tongotrao amin'ny pedal ary manandrana mamindra? eny! andao handeha ity no voalohany, ity no brianianina voalohany ara-bakiteny! ampiasao ny freins, tsy maintsy ataontsika io freins fanazaran-tena io. mampiasa ny tananao hamaky hitanao fa manana ny voajanahary amin'ny tongotra izy. Jereo ity! okay avereno. eny, tsara be! tsara ge mandeha haha! andao handeha, okay, jereo. 'Mbola manangana ireo fahazarana ireo izahay.
Saingy, fantatrareo fa dimy minitra eo ho eo izahay. Ity ny fivelomanao dimy minitra momba ny fomba bisikileta. Ny fahazoana ny haben'ny bisikileta mety indray, fampiharana ny fandanjalanjana nefa tsy mandeha am-paingotra, mihatsara kely amin'ny fampiakarana ny tongotra iray ho ambony ary amin'ny fampiasana ilay iray hafa toy ny scooter ary avy eo fampiharana ny freins.
Ary avy eo dia mitaingina bisikileta ianao amin'ny ankapobeny. Ka manaova fialam-boly, alao antoka, mitafia ny fiarovan-dohanao sy izany rehetra izany ary eny, eny! ut any. Ity dia fomba tena tsara hivezivezena.
Sady ara-pahasalamana no miorina amin'ny fiaraha-monina ary tena mahafinaritra fotsiny.
Inona no atao hoe bisikileta FLIZ?
nyBisikileta fifandanjana STRIDERafaka ampiasain'ny olon-drehetra, amin'ny taona rehetra. Ankizy maro naolon-dehibeizay nilazana fa tsy handeha intsony intsony dia mahita fahombiazana ao amin'nybisikileta mandanjalanja. NySTRIDERmanao izay azo atao.
Ny bisikileta 10 hafahafa indrindra eto an-tany. Isa 10. Angamba diso fanantenana noho ny fahatarana be loatra tao amin'ny Penn Station any New York City, ny mpitantana ny famolavolana, Juda Schiller, dia nahita fomba tsara handehanana avy any New Jersey mankany Manhattan: bisikileta iray any anaty rano.
Ny hybride amin'ny bisikileta Schiller dia bisikileta an-tendrombohitra miraikitra amin'ny vatan-kazo mipetaka amin'ny pontoons roa azo aidina. Ny mekanisma fametahana mifatotra amin'ny vodilan'ny bisikileta dia mamindra herinaratra avy amin'ny kodiarana aoriana mankany amin'ny propeller miraikitra amin'ny kodiarana eo aloha. Rehefa manitsaka ny pedal ny mpitaingina dia mihodina ny propeller ary mitazona ny bisikileta amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 16 km / h ary mamela ny fampiasana feno ny familiana ny tohatra.
Ny fitaovana iray manontolo dia azo apetraka ao anatin'ny 15 minitra ary rava ao anatin'ny 5 minitra, avelany bisikileta azo amoron-dalana sy kitapo feno kojakoja milanja latsaky ny 20 pounds ny mpitaingina azy. Schiller nitaingina bisikileta rano namakivaky ny Ony Hudson sy ny San Francisco Bay. Isa 9.
Josh Bechtels Bicymple dia manaparitaka an'ity singa mavesatra mahazatra ity ary miantehitra amin'ny foibe misy kodiarana maimaim-poana miaraka amina fiara mivantana, izay mampifandray ny valan-tànana mitifitra amin'ny vodi-kodiarana aoriana. Izy io dia mamorona velaran-koditra fohy kokoa sy fijery somary hafahafa, miaraka amin'ireo pedal amin'ny kodiarana aoriana sy ny fipetrahana bisikileta eo ambony eo amboniny. Na eo aza ny fisehoany tsy mahazatra, ny bisikileta dia mitaingina bisikileta hafainganam-pandeha tokana, afa-tsy ny maodely familiana aoriana tsy azo avela izay mamela anao hitety sisin-tany.
Isa 8. Ny kodiarana antsasaky ny kodiarana noforonina tany Alemana dia nametaka ny kodiarana roa sy ny pedal ary ny kodiarana amin'ny bisikileta amin'ny rafitra aoriana nohavaozina. Ity kodiarana tapany ity dia mitovy amin'ny bisikileta ampahatelon'ny bisikileta.
Mamakivaky ny arabe izy ary mora ny mitondra sy mitahiry noho ny refy misy azy. Ny kodiarana antsasaky ny mazava dia mifatotra mankany amin'ny tsenan'ny fivezivezena an-tanàn-dehibe ary bisikileta tsotra tsotra kokoa izay mety indrindra amin'ny trano kely indrindra tanàna Ny bisikileta faran'izay kely, mipetraka eo ambonin'ny lasely ianao, misambotra ireo tantanana mihazakazaka eo ambanin'ny lasely ary manomboka mametaka. . Isa 7.
Nahatsapa fa ny bisikiletany stoopid daller 15-tongotra tsy ampy habe loatra, namorona ilay cameraman LA ho any Richie Trimble. Miaraka amin'ny haavo 6 metatra mahery monja dia heverina ho bisikileta avo indrindra eto an-tany izy io. Ny bisikileta dia fitaovana 275-kilao vita amin'ny Monster Beach Cruiser, bisikileta valo mifamatotra, ary kodiarana roa 36-inch.
Trimble dia nanangana azy tao anatin'ny efa-andro monja. Nomery 6. Ny mpamorona Michael Killian dia tia ny fahatsapana fa eo amin'ny vatom-panala dia mandanjalanja koa, mamolavola ny tsipika mamelana amin'ny lanezy.
Izy koa dia tia milomano. Ataovy miaraka amina atrikasa ireto fifaliana roa ireto dia azonao ny SidewaysBike, famoronana kodiarana mahafinaritra an'i Killian. Ao amin'ny tranonkalany dia nilaza i Killian fa ny fifandanjana miandalana na miverina miverina ampiasanao amin'ny SidewaysBike dia manome fifehezana tsara kokoa noho ny fihodinan'ny bisikileta amin'ny bisikileta mahazatra, ary na marina izany na tsia, dia toa mahafinaritra be tokoa izanyNumber 5 .
Tamin'ny volana septambra 2013, mpitaingina bisikileta matihanina taloha sy 'Flying Scotsman' Graeme Obree sy ny bisikiletany Beastie no nametraka izao tontolo izao ho an'ny bisikileta haingam-pandeha indrindra amin'ny toeran'ny mpiorina 56.62 mph. Ny fihodinan'ny hafainganam-pandehan'i Obree dia mitaky azy amin'ny toerany mihodinkodina, handroso, hidina any an-kibo ary manana levers any aoriana izay azon'i Obree ampiasaina hivezivezy tampoka aorian'ny fanombohana.
Misy ihany koa fitsaharana amin'ny soroka ho an'ny fahamarinan'ny mpamily. Ny zavatra rehetra ao anaty akorandriaka vita amin'ny kevlarand mba hiarovana azy amin'ny ratra. Manana varavarankely kely eo anoloana izy ary snorkel ho an'ny fofon'aina.
Isa 4. Ireo mpikambana ao amin'ny Mijl van Mares Werkploeg any Netherlands dia nanamboatra bisikileta lava indrindra eran'izao tontolo izao tamin'ny 2011. 117 metatra 5 santimetatra ny halavany, manana kodiarana roa izy ary tsy misy stabilisatera.
Ity bisikileta tena lava ity dia mitaky olona roa hiasa. Ny iray mamily lalana ary ny iray hafa manitsaka ny pedal any aoriana. Isa 3.
Te hanana bisikileta azonao apetraka ao anaty valizinao ve ianao? Noforonin'i Karsten Bettin, ny Kwiggle dia manana hinge mamela azy hirodana anaty fonosana kely, miaraka amina kodiarana 8-inch, ary milanja 14 kilao. Natao ho an'ny mitaingina izy rehefa mijoro (na dia misy seza azo itokisana aza) ary mety hahatratra hatramin'ny 15 mph. Na dia prototype aza izy ankehitriny, Bettin dia manantena ny hanome modely hafainganam-pandeha hainganana miaraka amina kodiarana 8 na 14-inch ho an'ny besinimaro atsy ho atsy.
Isa 2. Mety ho toy ny fiara fanatanjahan-tena izany, fa ny bisikileta Farfalla FFX dia bisikileta quad recumbent miaraka amina ivelany ambony. Ny bisikileta vita amin'ny aliminioma, namboarina tamin'ny 2012, dia natao ho an'ny 'mpitaingina' iray na roa (na dia misy kodiarana ho an'ny kodiarana aza navela) ary mihazakazaka amin'ny herin'olombelona.
Izy io dia manana fitaovam-pandehanana 11 hafainganam-pandeha 11 hazavana, hazavana LED ultra-mazava 200 ho an'ny bisikileta amin'ny hariva ary ny endri-javatra mahafinaritra indrindra: rafitra lolo naorina izay mahatonga ny varavarana misolelaka hidina kely rehefa mandeha pedal. Isa 1. Ireo mpamorona anglisy John Foden sy Yannick Read dia namorona fiara nofinofy: bisikileta afaka manidina.
Ny XploreAir Paravelo dia afaka miakatra hatramin'ny 15 mph amin'ny arabe, 40 km / ora amin'ny rivotra, ary hatramin'ny 4000 metatra ny haavony. Izy io dia misy bisikileta miolaka kodiarana roa vita amin'ny alim-piaramanidina fiaramanidina sy tranofiara maivana izay misy mpankafy mahery miaraka amin'ny. Mitazona motera 249ccm misy herinaratra biofuel miampy elatra flexi ble izay miova ho lay (ho an'ny dia lavitra).
Ny starter elektrika iray dia manomboka ny motera ary mampody ny fan, izay miteraka tosika lehibe ary mampiakatra ny Paravelo amin'ny tany amin'ny làlambe lava lava. Afaka mijanona an-habakabaka mandritra ny adiny 3 izy io.
Ahoana no fiasan'ny bisikileta tsy misy pedal?
nySAMBATRAfoto-kevitrabisikiletafanandramana amin'ity hevitra ity ary mampiasa rafitra fiadiana izay azon'ny mpitaingina mihantona, fa tsy mipetraka eo ambonin'ny rindrina. Izany dia mihazakazaka ilay mpitaingin-tsoavaly mba hananganana momentum alohan'ny hametrahana ny tongony amin'ny andiana dian-tongotra eo akaikin'ny kodiarana any aoriana.
Fa maninona no tsy amidy amin'ny bisikileta ny bisikileta?
Ny ankamaroan'ny mpitaingina bisikileta dia mazàna mifikitra amin'ny iray amin'ireo fenitra ireobisikileta, Ka tsy mila manana kiraro maromaro izy ireo. Haavo avo lenta kokoabisikiletamazàna dialafoTSYafaka mitsofokaamin'izay ny mpanjifa dia afaka misafidy ny fomban'nypedalmifanaraka amin'ny kirarony efa misy.31. 2013.
Amidy amin'ny bisikileta ve ny bisikileta?
Ny antsika rehetrabisikiletatonga miarakaafaka mitsofokasatria takian'izy ireo araka ny lalàna izanymivarotrafenobisikileta. Ireo fototra ireoafaka mitsofokadia ho tafiditra ao anatin'ny fizotran'ny fananganana raha tsy misy mpivady iray hafaafaka mitsofokabaikoina miaraka amin'izay.
Ho an'ny firy taona ny bisikileta mandanjalanja?
Mizana mandanjalanjamety ho voalohanybisikiletaary mety ho an'ny ankizy manomboka amin'ny 3 taona. Izy ireo koa dia fomba tsara iray hahitan'ny ankizy ny tongony alohan'ny handehanany mihazakazakabisikileta. Rehefa mahazo ny azy ny zanakao kelybisikileta mandanjalanja, izy ireo dia mety 'mandeha' nybisikileta- mitazona ireo kofehin-tànana ary mandeha eo akaikiny.
Iza no namorona bisikileta an-tongotra?
Mahagaga fa na dia nisy zava-baovao aza tamin'ny taonjato faha-19, dia tamin'ny 1853 vao nisy ny mekanika amin'ny familiana savily.lasa. Io dia namela ny pedal mihodina mihodina izay toa voajanahary amintsika ankehitriny. Izy izay dianamoronanataon'i Jules Sourisseau, izay nametraka patanty ho azytongotra-mandeha amin'ny herinaratracrank tamin'ny 1853.
Iza no namorona ny bisikileta FLIZ?
Vaovaobisikiletaefanoforonina - ny FLIZ. Namboarin'i Tom Hambrock sy Juri Spetter, nybisikiletatsy manana pedal, mitaky mihazakazaka ilay mpitaingina moto mba hiteraka hafainganana.
Fa maninona ny bisikileta an-tendrombohitra no tsy manana kickstands?
Kickstandstsy eny an-dalana arybisikileta an-tendrombohitrasatria manampy lanja izy ireo ary mampitombo ny vintana mety ho anaobisikiletamanambotra zavatra. Maniry bisikileta no milabisikiletaho maivana.TENDROMBOHITR'ANDRIAMANITRAmatahotra ny bisikileta sao akickstandhisambotra zavamaniry rehefa mitaingina lalana.
Misy ve ny bisikileta toy ny bisikileta?
Betsaka ny olona no nanova ny bisikiletany nentin-drazana ho an'ny Segway, bisikileta elektrika ary moto scooter. Na eo aza ireo fahagagana ara-teknolojia mahatalanjona ireo dia tsy maty tanteraka ilay bisikileta. Mifanohitra amin'izany no izy, nivoatra toy ny fiara hafa rehetra amin'ny endrika bisikileta tsy misy pedal.
Misy bisikileta mandeha amin'ny maotera tsy mandeha pedal ve?
Ny Alinker dia bisikileta mandeha amin'ny maotera tsy mandeha am-paingotra tsy misy pedal. Ny Alinker dia ho an'ny olona rehetra izay te hihazona fiainana mavitrika na inona na inona fahaizany mihetsika / kilemaina.
ny fomba hampitomboana mitochondria
Bisikileta misy pedal na tsy misy pedal ve ilay alinker?
Ny Alinker dia bisikileta mandeha amin'ny maotera tsy mandeha am-paingotra tsy misy pedal. Miaraka amin'ny lasely sy kitondro azo ovaina, dia namboarina manokana hanoherana ny fiheveran'ny fiarahamonina momba ny fahasembanana.